Izindaba - Okufanele ukwenze lapho i-valve ivuza, futhi siyini isizathu esiyinhloko?
Usawoti we-alikhali we-acid
Ingcindezi ephezulu ye-valve 6.4 ~ 80MPa
Ingcindezi ephansi ≤1.6MPa
Okulingene ingcindezi valve 2.5 ~ 4.0MPa
Ukucindezela okuphezulu kwe-Ultra ≥100MPa
Umshini we-valve <0.1MPa
Pipe & nokufaka
Nge-temp of mediuml
Okuvamile -40 ~ 120 ° C
izinga lokushisa eliphakeme 450 ~ 600 ° C
izinga lokushisa eliphansi -150 ~ -40 ° C
okushisa okulingene 120 ~ 450 ° C
Ukushisa okuphezulu kwe-Ultra> 600 ° C
izinga lokushisa eliphansi kakhulu -150 ° C
Yini okufanele uyenze lapho i-valve ivuza, futhi siyini isizathu esiyinhloko?
Okokuqala, Ucezu lokuvalwa luyawa futhi lubangele ukuvuza
1. Ukusebenza kabi kwenza ingxenye yokuvala ibhajwe noma yeqe isikhungo esiphezulu esifile, futhi ukuxhumana kulimele futhi kwephukile;
2. Ingxenye yokuvala ayixhunyiwe ngokuqinile, ayithukululwa futhi iyawa;
3. Okokusebenza kwezingxenye zokuxhuma akulungile, okungakwazi ukumelana nokugqwala kokulimala okuphakathi nokomshini.
1. Sebenza kahle, ungasebenzisi amandla adlulele ukuvala i-valve, bese uvula i-valve ukuthi ingeqi esikhungweni esiphezulu esifile. Ngemuva kokuthi ivalvu ivulwe ngokuphelele, isondo lesandla kufanele lihlehliswe kancane;
2. Ukuxhumana phakathi kwengxenye yokuvala kanye nesiqu se-valve kufanele kuqiniswe, futhi ukuxhumana okuhlanganisiwe kufanele kube nesisekelo sangemuva;
3. I-fastener esetshenziselwa ukuxhuma ingxenye yokuvala kanye nesiqu se-valve kufanele imelane nokugqwala kwento emaphakathi, futhi ibe nezinga elithile lamandla womshini nokuqina kokugqoka.
Okwesibili, ukuvuza kwangaphandle ekupakisheni
1. Ukukhetha okungalungile kokupakisha, hhayi ukumelana nokugqwala okuphakathi, hhayi ukumelana ne-valve ingcindezi ephezulu noma i-vacuum, ukushisa okuphezulu noma uhlelo lokusebenza lokushisa okuphansi;
2. Ukupakisha akufakiwe kahle, kukhona okungahambi kahle njengokufaka okunye okukhulu ngokufaka okuncane, okungalungile kokuqina, ukuqinisa nokuxegisa;
3. Ukupakisha kudlule impilo yensizakalo, sekudala futhi kwalahlekelwa ukuqina kwayo;
4. Isiqu se-valve asiphezulu ngokunemba, futhi sinamaphutha njengokugoba, ukugqwala, kanye nokuhuzuka;
5. Inani lamasongo okupakisha alanele futhi indlala ayicindezelwe ngokuqinile;
6. Indlala, imishudo nezinye izingxenye konakele, okwenza ukuthi indlala ingakwazi ukucindezelwa;
7. Ukusebenza okungalungile, amandla ngokweqile, njll.;
8. Indlala isikiwe, futhi igebe eliphakathi kwendlala nesiqu se-valve lincane kakhulu noma likhulu kakhulu, okwenza ukuthi isiqu se-valve sigqoke futhi ukupakisha kulimale.
1. Okokusebenza nohlobo lokupakisha kufanele kukhethwe ngokuya ngezimo zokusebenza;
2. Faka ukupakisha kahle ngokuya ngemithetho efanele;
3. Ukupakisha okusetshenziswe isikhathi eside, ukuguga, noma ukulimala kufanele kushintshwe ngesikhathi;
4. Lapho isiqu se-valve sigobile noma sigugile, kufanele siqondiswe futhi silungiswe. Uma ilimele kakhulu, kufanele ithathelwe indawo ngesikhathi;
5. Ukupakisha kufanele kufakwe ngokwenani elicacisiwe lamasongo, indlala kufanele iqiniswe ngokulingana nangokulinganayo, futhi umkhono wokucindezela kufanele ube negebe langaphambi kokuqina elingaphezu kuka-5mm;
6. Izindlala ezilimele, amabhawodi nezinye izingxenye kufanele zilungiswe noma zishintshwe ngesikhathi;
7. Izinqubo zokusebenza kufanele zilandelwe, ngaphandle kwensimbi yesandla yomthelela, ukusebenza ngejubane elingaguquguquki nangamandla ajwayelekile;
8. Amabhawodi endlala kufanele aqiniswe ngokulinganayo nangokulinganayo. Uma igebe eliphakathi kwendlala nesiqu se-valve lincane kakhulu, igebe kufanele lenyuswe ngokufanele; uma igebe eliphakathi kwendlala nesiqu se-valve likhulu kakhulu okufanele lithathelwe indawo.
Okwesithathu, Ukuvuza kwendawo yokubekwa uphawu
1. Indawo yokubekwa uphawu ayilingani futhi ayikwazi ukwakha umugqa oqinile;
2. Isikhungo esiphezulu sokuxhuma phakathi kwesiqu se-valve nengxenye yokuvala simisiwe, asilungile noma sigugile;
3. Isiqu se-valve sigobile noma sihlanganiswe ngokungafanele, okwenza ingxenye yokuvala isontwe noma ihlelwe kabi;
4. Ukukhethwa okungalungile kwekhwalithi yempahla yokuvala uphawu noma ukwehluleka ukukhetha i-valve ngokuya ngezimo zokusebenza.
1. Khetha ngokufanele okokusebenza nohlobo lwegasket ngokwezimo zokusebenza;
2. Lungisa ngokucophelela futhi usebenze kahle;
3. Amabhawodi kufanele aqiniswe ngokulinganayo nangokulinganayo, futhi kufanele kusetshenziswe i-torque wrench lapho kunesidingo. Amandla okuqinisa ngaphambili kufanele ahlangabezane nezidingo futhi akufanele abe makhulu kakhulu noma amancane. Kufanele kube khona igebe elithile langaphambi kokuqina phakathi kwe-flange nokuxhumeka okuhlanganisiwe;
4. Umhlangano we-gasket kufanele uqondaniswe enkabeni, futhi namandla kufanele alingane. I-gasket ayivunyelwe ukugqagqana noma ukusebenzisa ama-gaskets aphindwe kabili;
5. Ubuso bokubekwa uphawu kwe-static bonakalisiwe, bonakalisiwe, futhi ikhwalithi yokucubungula yimbi. Ukulungisa, ukugaya, kanye nokuhlolwa kombala kufanele kwenziwe ukwenza indawo yokubekwa kwe-static ihlangabezane nezidingo ezifanele;
6. Nakisisa ukuhlanza lapho ufaka i-gasket. Indawo yokuvala kufanele ihlanzwe ngophalafini futhi i-gasket akufanele iwele phansi.
Okwesine, Ukuvuza ekuhlanganyeleni kwendandatho yokufaka uphawu
1. Iringi yokubopha ayigoqiwe ngokuqinile;
2. Indandatho yokufaka uphawu ishiselwe emzimbeni, kepha ikhwalithi yokuqhamuka ayibi;
3. Intambo yokuxhuma indandatho yokuvala, isikulufa nengcindezi yendandatho ikhululekile;
4. Iringi yokubopha ixhunyiwe futhi yagqwala.
1. Ukuvuza endaweni evaliwe yokugingqika kufanele kujovwe ngesinamathelisi bese kugingqwa futhi kulungiswe;
2. Iringi yokufaka uphawu kufanele ilungiswe ngokuya ngemininingwane yokushisela. Lapho i-welding evulekile ingenakulungiswa, ukufakwa kwangempela nokulungiswa kufanele kususwe;
3. Susa izikulufo nendandatho yengcindezi ukuhlanza nokufaka ezinye izingxenye ezilimele, gaya indawo yokuvala uphawu kanye nesihlalo sokuxhuma, bese uhlanganisa kabusha. Ezingxenyeni ezinomonakalo omkhulu wokugqwala, i-welding, i-bonding nezinye izindlela zingasetshenziswa ukulungisa;
4. Uma indawo yokuxhuma yendandatho yokufaka uphawu isonakalisiwe, ingalungiswa ngokugaya, ukubopha nezinye izindlela. Uma ingeke ilungiswe, iringi yokufaka uphawu kufanele ishintshwe.
Okwesihlanu. Ukuvuza komzimba we-valve nekhava ye-valve:
1. Ikhwalithi yokufakwa kwensimbi yimbi, futhi kukhona ukukhubazeka okufana namabhamuza, ukwakheka okuxekethile nokufakwa kwe-slag emzimbeni we-valve nesembozo se-valve.
2. Ukuqhwa kwesimo sezulu;
3. Ukushisela okubi, kukhona ukukhubazeka okufana nokufakwa kwe-slag, okungashisi, ukuqhekeka kwengcindezi, njll .;
4. I-valve yensimbi eyakhiwe yalimala ngemuva kokushayiswa yinto esindayo.
1. Thuthukisa ikhwalithi yokusakaza, futhi wenze ukuhlolwa kwamandla ngokuhambisana nemithetho ngaphambi kokufakwa;
2. Kumaphayiphu atshisa okusebenza angaphansi kuka-zero degree Celsius, kufanele agcinwe efudumele noma exutshwe nokushisa, futhi ama-valve angasebenzi kufanele akhishwe ngamanzi amile;
3. Umthungo wokushisela womzimba we-valve kanye nebhonethi eyakhiwe ngokushisela kufanele kwenziwe ngokuya ngemithetho yokusebenza efanele ye-welding. Futhi ukutholwa kwamaphutha namandla okuhlola kufanele kwenziwe ngemuva kokushisela;
4. Akuvunyelwe ukuphusha nokubeka izinto ezisindayo ku-valve, futhi akuvunyelwe ukushaya ama-valve wensimbi kanye nama-valve okungewona awensimbi ngesando sesandla. Ukufakwa kwamavalvu amakhulu anobubanzi kufanele kuqedwe ngamabakaki.
Trunnion Ibhola Valve, I-Valve Yesango Lamanzi, Engagqwali Isango Valve, Engagqwali Ball Valve, I-Sluice Gate Valve, I-Angle Globe Valve,